हिमाल खबरपत्रिका | “रातभरि पनि काममै छौं”
“रातभरि पनि काममै छौं”
१३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) आउन १० दिन मात्रै बाँकी हुँदा अझै निर्माण अपूरै रहेका भौतिक संरचनाबारे खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, “पुनर्निर्माण ढिला शुरू भएकाले हतारमा काम गर्नु परेको छ।”
सागको तयारी निकै सुस्त र ढिला भयो; किन वेलैमा काम हुन सकेन ?
नेपालले १३औं साग गर्ने जिम्मेवारी २०७२ सालमै पाए पनि त्यतिवेलाका सरकारले भूकम्पबाट भत्किएका संरचना समयमा बनाउन र मर्मत गर्न चासो दिएनन् । पछिल्लो डेढ वर्षमा हामीले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छौं । लन टेनिस कोर्ट, स्क्वास भवन, शूटिङ भवन बनिसके भने हीटिङ स्वीमिङ पुल र दशरथ तथा पोखरा रङ्गशाला निर्माण अन्तिम चरणमा छन् । ती संरचना हप्ता दिनभित्र तयार भइसक्छन् ।
दशरथ रङ्गशालाको पुनर्निर्माण नसकिएर उद्घाटन नै प्रभावित हुने अवस्था त आउँदैन ?
हामी साँझ, बिहान मात्र होइन राति पनि काम गरिरहेका छौं । अबको एक सातामा रङ्गशालाको काम सकिन्छ, त्यसपछि मञ्च निर्माण गर्नेछौं । रङ्गशाला पुनर्निर्माण नै ढिला शुरु भएकाले धेरै हतारमा काम गर्नु परेको छ ।
खेलस्थल अभावमा खेलाडीले राम्रो तयारी गर्न पाएनन् । यतातिर वेलैमा ध्यान किन गएन ?
पहिला नै रङ्गशाला तयार थियो भने अभ्यासमा समस्या हुँदैनथ्यो, घरेलु मैदानको लाभ हुन्थ्यो । केही खेलका पूर्वाधार भव्य छन् तर, केहीमा समस्या भएकै हो । त्यसैले अधिकांश खेलका खेलाडीलाई हामीले विदेशमा प्रशिक्षणका लागि पठाएका छौं ।
१३औं सागमा नेपालले कति पदक जित्ने आशा छ ?
१५ महीनाअघि इण्डोनेशियामा भएको १८औं एशियन गेम्समा नेपाल दक्षिण एशियाली देशमध्ये दोस्रो भएको थियो । अहिले त्यो सफलतालाई कायम गर्ने चुनौती छ । हामीले त्यतिवेलैदेखि १३औं सागलाई ध्यान दिएर तयारी गरेका थियौं । घरमा हुने प्रतियोगितामा विगतको विरासत कायम गर्नेछौं । ठ्याक्कै पदक संख्या भन्न चाहिं सकिंदैन ।
स्वर्ण पदकको आशा गरिएको पाराग्लाइडिङ अन्य देशसँग पर्याप्त छलफल नगरी समावेश गर्दा अन्तिम समयमा रोकिएको हो ?
साउथ एशियन ओलम्पिक कमिटीमा रहेका सातै देशका प्रतिनिधिले सर्वसम्मत रुपमा २७ खेल राख्ने निर्णय गरेका हुन् । कम्तीमा चार वटा देशले भाग नलिंदा पाराग्लाइडिङ नहुने भयो । यो अवस्थाबारे हामीले सबै देशका ओलम्पिक कमिटीको ध्यानाकर्षण गरेका छौं ।